MSD IsiZulu - Amandla.mobi
Tshela i-SABC ne-etv ukuthi basakaze i-Miners Shot Down
Esikhathini esedlule esiyizinyanga eziyi-13 amalunga e-amandla.mobi ame kanye nabafelokazi babasebenzi abashona eMarikana. Ngokubambisana nabantu abadlulile ezinkulungwaneni ezinhlanu, amalunga e-amandla.mobi afake ingcindezi kwi-SABC kanye ne-etv ukuthi zombili lezi ziteshi zazise wonke umuntu waseMzansi ukuthi kungani amaphoyisa abulala abantu ababecela umholo ongcono kwinkampani i-Lonmin.
Phambi kosuku lokugubha ukukhumbula isibhicongo saseMarikana ngonyaka odlule, abafelokazi kanye namalunga emindeni yalabo abadlulayo eMarikana basuka kwi-Khomishana kaFarlam baya ezindaweni zokusakaza ze-SABC kanye ne-etv beyothula izikhalo zokuthi lezi ziteshi zisakaze umbukiso i-Miners Shot Down.
Lo mbukiso uxoxa kabanzi ngodaba lwabasebenzi basezimayini eMarikana, futhi uma singapholisi maseko i-SABC ne-etv bangavuma ukuthi bawusakaze lo mbukiso.
Ukubukela i-Miners Shot Down kuyakuguqula njengesakhamuzi saseNingizimu Afrika. Lo mbukiso, osubizwe njengombukiso okufanele ubukwe yiwo wonke umuntu waseMzansi, awukasakazwa yi-etv kanye ne-SABC. Akukaze kwenzeke phambilini eNingizimu Afrika ukuthi kube khona iningi labantu abafuna ukuthi kusakazwe umbukiso njenga lo.
i-Miners Shot Down umbukiso oxoxa kabanzi ngodaba lwabasebenzi basezimayini eMarikana, futhi uma singapholisi maseko i-SABC ne-etv bangavuma ukuthi bawusakaze lo mbukiso.